‘बैङ्किङमा राजनीतिक प्रभाव अस्वीकार्य’ – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैङ्किङ प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव पर्न नहुने बताएका छन् । न्यू बिजनेश एजले राजधानीमा आयोजना गरेको पाँचौं ‘न्यू बिज बिजनेश कन्क्लेभ एण्ड अवार्ड २०१८’ को उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
बैङ्क अाफ्नै सञ्चालक समिति र कार्यविधिबाट निर्देशित भई पारदर्शी रूपमा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका हुन् । यद्यपि बैङ्कहरूमा कहिलेकाहीँ राजनीति हाबी हुँदा अप्ठ्यारो अवस्था सृजना हुने गरेको टिप्पणी गर्दै यसो नगर्न सम्बन्धित सरोकारवालालाई उनको आग्रह थियो । वित्तीय संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैङ्कको नियमनमा रहन र बचतकर्ताको विश्वास बढाउन जरुरी भएको उनको ठहर छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्किङ उद्योग कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । बैङ्किङसम्बन्धी राम्रो नीतिगत र कानूनी व्यवस्था भए पनि यसको पूर्ण पालना र समयानुकूल परिमार्जन जरुरी भएको उनको तर्क छ । राम्रा कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै बैङ्किङ प्रणालीमा जहिले पनि जोखीम हुने भएकाले प्रविधिको विकासलाई नयाँ चुनौती तथा अवसरका रूपमा लिएर समयसापेक्ष अघि बढ्न बैङ्कहरूलाई सुझाव दिए, याे खबर अाजकाे अार्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
संसारका १० राष्ट्र जहाँ पेट्रोलको मूल्य १ देखि ५० रुपयाँ मात्रै !! जान्नुहोस ती राष्ट्र कुन कुन ?